Isticmaalka Mobillada Oo Meesha Ka Saari Doona Comuputerrada – Goobjoog News
Isticmaalka Mobillada Oo Meesha Ka Saari Doona Comuputerrada
Waxaa la sheegaa in sanadka soo socda uu kor u kici doono isticmaalka Mobillada, isla markaana uu geli doono booskii Computerada.
Xilgan la joogo, dadka waxaa ay xoogga saaraan Mobillada sida in ay isku diraan fariimaha, ka galaan Internet-ka, Mobilka waxaa uu noqday mid ay ku tiirsan yihiin dadka badan oo caalamka ah.
Khubaro dhanka warfaafinta ah ayaa waxay shegayaan in 75 boqolkiiba isticmaala aaladda internetka loo isticmaalo teleefoonada gacanta lagu qaato ay kordhi doonaan sanadka 2017 taas oo hadda wax yar ka badan i yadoo tirada sii kordhaysa oo macaamiisha ku nool dunida ee ay heli karaan Internet-ka ee mara telefoonka smart iyo Computerada.
Wakaaladda lagu magacaabo “Aynnnu” Media Marketing oo ka shaqeysa dhanka suuq geynta warfaafinta ayaa waxay horey u saadaalisay in boqlkiiba 71% internetka laga isticamaali mobillada waaweyn oo casriga .
Wakaaladdan “aynnnu” Media Marketing ayaa warbixin ay soo saartay oo labaahiyey waxay sheegtay 60% xayisiinta lagu sameeyo internetka loo isticmaalo qalabka Mowbillada, iyadoo xustay in xayesiinkaan lagu bixinaayo Mobillada oo gaari doono sanadka 2018 134 Bilyan.
Cunnooyin Cunistooda Habeenkii Laga Deyriyay
Google ayaa Ka Jawaabaya Emaillada Lagu soo Diro